“Nahoana No Tian’ny Governemanta Hosimbàna Aminà Toby Famokarana Herinaratra Mandeha Amin’ny Arintany i Krabi ?” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Aogositra 2015 4:50 GMT
Tany ampiandohan'ny 2014 ny Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) – Sampan-draharaham-panjakana mpamokatra sy mpaninjara herinaratra eo ambany fiadidian'ny Ministeran'ny Angovo ao Thailand , dia nandroso hevitra hanangana toby iray famokarana herinaratra ahodina amin'ny arintany, hanana tanjaka 870 megawatts ao Krabi.
Ankoatra izay, sosokevitra avy aminy ny hanorenana seranana ho an'ny arintany ao Nuea Khlong, izay mbola ao Krabi ihany koa.
Ampahany amin'ilay drafitry ny governemanta momba ny angovo, antsoina hoe Drafitra 2010 ho Fampiroboroboana ny Herinaratra ilay asa fanorenana, mba hampitomboana ny famatsiana herinaratra ao amin'ny firenena. Nampitandrina i Prayuth Chan-ocha praiminisitra fa raha toa tsy tanteraka ilay drafitra dia mety hizaka vidinà herinaratra midangana vokatr'izany ny olom-pirenena Thai.
RAMSAR dia fifanarahana iraisampirenema izay mitily ireo faritra mando mila arovana mba hitazonana ny fifangaroana samihafan'ny zavamiaina erantany.
Nilaza ny mponina iray tao am-bohitra fa tsy nalaina tsara araka ny tokony ho izy ny hevitr'ilay vondrom-piarahamonina:
Araka ny fitsipiky ny Ministeran'ny Harena Voajanahary sy ny Tontolo iainana, izay rehetra tetikasa famokarana herinaratra manana tanjaka maherin'ny 100 megawatts dia tsy maintsy atolotra hanaovana (EHIA) Fandinihana Ny Ho Fiantraikany Amin'ny Tontolo iainana sy ny Fahasalamana alohan'ny hahazoany fahazoan-dàlana avy amin'ny governemanta.
Ny 5 Aogositra lasa teo, fikambanana niisa 42 sy olontsotra 52 no nanasonia taratasy iray nangataka ny governemanta mba hanajanona ilay tetikasa. Nampahatsiahivin-dry zareo an'ireo manampahefana fa marintoerana ny angovo ao amin'ny faritra ary mbola misy ambim-bava aza ny resaka famatsiana herinaratra. Fitakiana telo no ao anatin'ilay taratasy :
Nanamafy ihany koa ireo mpanokatra herinaratra ao an-toerana fa misy fomba hafa ankoatry ny arintany, toy ny fampisàna ny angovo azo havaozina. Tian'izy ireo ihany koa ny governemanta mba hiatrika ny tsy fahampian'ny tambajotra izay olana goavana be amin'ny fitsinjaràna ny herinaratra manerana ny firenena.
Tao amin'ny pejiny Facebook, Akradej Chakjinda, mpanentana iray avy ao amin'ny “Avoty amin'ny Arintany i Andaman” nanoratra momba ny tolon'ireo mponina ao Krabi mba hiarovana ny tsy hahasimba ny tontolo iainan-dry zareo :